Lezienụ kwa Pịa: Okwu Nchọpụta Injin 4 Na-emerụ Ahụ
Ọ baghị uru n ’ụdị agụmakwụkwọ izizi ị tinyere n’ime nkwekọrịta ọhụụ, otu Onye Nchọpụta Injin Ngini Nchọpụta ga-apụta mgbe ị na-atụghị anya ya. Achọpụtala m ndepụta dị mkpirikpi nke Villains na anyị, na Mgbe niile, yiri ka ọ na-abịa mgbe ị na-atụ anya ihe ọhụrụ.
Nwere ike ịghọta otu n'ime ndị a?
Enweghị Ihe Mgbaru Ọsọ - Ekwula ego ole I choro imefu, gwa m ego ole ichoro ime
Na nzukọ ọhụụ ọ bụla anyị na-ajụ ajụjụ, “Gịnị bụ ebumnuche azụmaahịa gị?”. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla azịza ya bụ "ịchụpụkwu okporo ụzọ" ma ọ bụ "n'usoro na isiokwu ndị akọwapụtara". Onye na - acho Injin Ihe Njin gi choro ighota ihe n’eme ka azumahia gi. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịchọta isiokwu ziri ezi nke ga-eme ka okporo ụzọ dị mma karịa na weebụsaịtị gị. Enweghị mmezi azụmahịa gị na ịchọta ihe mgbaru ọsọ ịzụ ahịa bụ otu n'ime ihe ndị na-akpatakarị ọdịda ahịa ịntanetị.
Enweghị ihe enyemaka na nkwa - Enweghị Ihe Nkọkọkọwo Ọtụtụ Mmadụ
Obi abụọ adịghị ya na ị ga-achọ ihe onwunwe iji mezuo ebumnuche azụmaahịa gị search engine. Shirley Tan dere ezigbo post na SearchEngineLand urua gara aga banyere eziokwu a. Ndị azụmahịa anaghị aghọtacha nke ahụ iji wee nwee ihe ịga nke ọma chọrọ akụnụba mmadụ na itinye ego na ya. Nwetakwu okporo ụzọ weebụ na saịtị gị abụghị n'efu. E nwere ụlọ ọrụ ole na ole nwere oke ego site na mmalite iji nweta ihe ha chọrọ.
Enweghị ndidi & Elekwasị anya - O nweghị nke ị rụzuru ugbu a ga-aba ọfụma ma ọ bụrụ na ị naghị achụso ihe ịga nke ọma
O siri ezigbo ike na mgbasa ozi ahịa ọchụchọ na-arụ ọrụ mgbe otu ọnwa ma ọ bụ ọnwa abụọ gasịrị. E nwere ihe kpatara Ndị na-ahụ maka Injin Ngini Nchọgharị chọrọ ka ụlọ ọrụ banye na nkwekọrịta 6 ma ọ bụ 12. Iji mezuo ebumnuche ịchọrọ azụmaahịa na-ewe oge. Njikwa Nchọgharị Search (SEO) abụghị otu ma emee ya. SEO bụ usoro na-aga n'ihu nke njikarịcha na saịtị na saịtị. Lezienụ Kwa Pịa (PPC) na-adịghị ga-echefu. PPC bụ usoro mmegharị na-aga n’ihu iji nweta ego kachasị maka ego gị.
Enweghị Ntị & Mgbu - Ekwensu nọ na nkọwapụta
Azụmaahịa gị na usoro ịre ahịa n'ịntanetị nwere ike ịbụ enweghị ntụpọ, mana enweghị nlebara anya na igbu ya nwere ike gosipụta atụmatụ kachasị mma. Eleghara ntị na imezu ihe ndozi na-eduga na ohere furu efu iji bulie ROI. SEO abụghị ihe gbasara njikọ njikọ, ị payinga ntị na njikarịcha saịtị gị nwere ike ibuwanye ọkwa. Ibe ndabara bu igodo igbanwe uzo PPC. PPC abụghị ihe na-eme ka ọnụahịa gị belata, ọ bụ ihe dị ala Ọnụ ego ọ bụla na-agbanwe.
Tags: amazon s3ahịaTụọ CPmyrepono
Feb 18, 2011 na 5:23 PM
Aga m eji foto site na Office Space gụọ ọ bụla blog post. Agbanyeghị, ị na-eweta ụfọdụ ihe ọma. Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị ahịa ghọta na n'adịghị ka usoro ahịa ndị ọzọ, ọ na-ewekarị oge n'ịntanetị iji wuo akara gị na ọnụnọ ya na igwe ọchụchọ. Ndidi bu ihe di nkpa.
Feb 18, 2011 na 9:26 PM
Lumbergh bụ kpochapụwo nkiri agwa!
Na-ekwu eziokwu… Ndidi bụ ihe dị mkpa maka itinye aka n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Feb 19, 2011 na 10:57 PM
“N’adịghị oke ọrụ mgbasa ozi ọchụchọ na-arụ ọrụ mgbe otu ọnwa ma ọ bụ ọnwa abụọ gasịrị”.
Yabụ kedu ihe kpatara enwere mgbasa ozi n'aka ekpe nke post a - okpukpu atọ gị na ebe nrụọrụ weebụ na 48 awa?
Echiche Web Web
Mee 3, 2011 na 8: 30 AM
Site na iji PPC dị ka ngwa ahia ịntanetị, saịtị azụmaahịa agaghị enwe mgbanwe ọ bụla iji kwụọ ụgwọ maka ọkwa njin ọchụchọ kacha elu.